အကောင်းမြင် | MoeMaKa Burmese News & Media
သြဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၁၂
အံ့မခန်း ခေတ်မီနေပုံလေ …။
သြော် … သူတို့အဆိုများ
နာမည်ပျက် (နည်း) ခဲ့တယ်ဆိုပါဘဲ
အလုပ်တွေလုပ်ခိုင်းဖို့ ပေးခဲ့တဲ့ဆု …။
ထပ်ပေးမယ်ဆိုရင် သမတကြီးရေ … …
ပြောလိုက်စမ်းပါ …. ….
2 Responses to အကောင်းမြင်
မောင်ပျာလောင် on August 27, 2012 at 5:48 am
ကျနော်သိသလောက်ကတော့ ကလောင်အမည်ကို တစ်ခုဘဲေ၇းတာဖတ်ဖူးပါသည်။ နိုင်ဦးညို ဆိုလျှင်လည်း နားလယ်ပါပြီ၊ ဖိုးဇီရိုး ဆိုလျှင်လည်း နားလယ်ပါပြီ။ ကျနော့ကိုကြည့်ပါ မောင်ပျာလောင်ဆိုလျှင် လှည်းတန်းဈေးအရှေ့ က အပေါင်းအသင်းမျာ အားလုံး သိပါသည်။ နာမယ်ရင်း – စိုင်းခမ်းလှိုင်လှိုင် – (အမည်တူများကို သတိထားပါ) ကိုထဲ့ပေါင်းပြီး မောင်ပျာလောင် (စိုင်းခမ်းလှိုင်လှိုင်) လို့ ရေးရင် စာဖတ်သူတွေဘယ်လောက် မေတ္တာပို့ လိုက်ကြမလည်း။ အကောင်းမြင်ဝါဒကို သဘောကြလွန်းလို့ ရေးလိုက်ထာဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူကို စောကားတာမဟုတ်ပါ ခင်ဗျား။
နိုင်ဦးညို on August 27, 2012 at 3:03 pm
အာဠာဝကသခင်ဖိုးလှကြီး လောက်တော့ ကျနော်နာမည်က မရှည်လှပါဘူး ကိုမောင်ပျာလောင် ရေ ……….